१५ अर्ब स्वाहा, २८ वर्षदेखि लथालिंग !
अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत सभ्यता विकास समितिका अनुसार अहिले सम्म सबैभन्दा ठूलो लगानी वाग्मती नदीमा भएको छ। यो नदिको कुल लम्बाइ २ सय किलोमिटर रहेकोमा काठमाडौं उपत्यकामा पर्ने २४ किलोमिटर क्षेत्रमा अहिले सडक लगाएतका पूर्वाधार बनाउने काम चलिरहेको छ। २४ किलोमिटर सडकको काम लगभग सकिएको छ तर सम्पदा क्षेत्र भएर बग्ने नदिमा पुरै करिडोर जोड्न सकिएको छैन, ईन्जिनियर कमल अर्यालले भन्नुभयो। समितिको कार्यालय नजिकै नयाँ बस्ती आसपासको करिडोरमा २२ रोपनी जग्गाको मुअव्जा विवाद चलिरहेको छ। समितिले न ल्याण्ड पुलिङ मार्फत नदिले धार परिवर्तन गर्दा जग्गा गुमाएकाहरूलाई चित्त बुझाउन सक्छ, न उनिहरूको जमिन नै किन्न सकिने अवस्थामा छ। समितिका सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार, अहिले सबैभन्दा धेरै जग्गाको समस्या वाग्मती र हनुमन्ते करिडोरमा छ। वाग्मतीको किनारा बल्खु आसपासको क्षेत्रमा १८८ रोपनी जग्गाको विवाद परेको छ। बानेश्वर क्याम्पस नजिकै नदिको धारपरिवर्तन सम्वन्धी ७३ रोपनी जनिमको विवाद छ। थापाथली क्षेत्रका सयौं सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सकिएको छैन। सबै नदि आसपासको क्षेत्रमा बसिरहेका ३ हजार ५ सय भन्दा बढी यस्ता भुमिहिन अहिले करिडोर निर्माणमा अर्को उल्झन बनेका छन्।
नदिमा फरक फरक मापदण्ड
मापदण्ड अनुसार, बालकुमारी पुलदेखि साँखु ब्रह्मखेलसम्मको करिब ९ किमि लामो करिडोरमा ११ मिटर सडक र ९ मिटरमा ग्रिनबेल्ट निर्माण गरिने उलेखछ। तर करिडोरको अधिकांश ग्रिन बेल्ट फोहोरले छोपीएको छ। गोपीकृष्ण देखि बालुवाखानी चोकसम्मको धोवीखोला करिडोरमा धेरै स्थानमा मापदण्डा मिचेर पक्कि पुर्वाधार बनाइएकाले करिडोर सडक अथवा ढल निर्माण पुरा भएको छैन। सरकारले वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ २० मिटर मापदण्ड तोकेको छ। वाग्मती नदीको बहाव क्षेत्र र स्थान हेरी फरक निर्धारण गरिएको अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकिकृत सभ्यता विकास समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार, सुन्दरीजलदेखि गोकर्णसम्म २० मिटर, गोकर्णदेखि जोरपाटी पुलसम्म ३५ मिटर, जोरपाटी पुलदेखि गुहयेश्वरीसम्म ४० मिटर, तिलगंगादेखि शंखमूल खण्डमा न्यूनतम ३० मिटर, शंखमूलदेखि विष्णुमती दोभानसम्म न्यूनतम ६० मिटर बहाव क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। विष्णुमती दोभान र त्यसको तल्लो तटीय क्षेत्रमा न्यूनतम ८० मिटर बहाव क्षेत्र कायम गरिएको छ। समितिले यही मापदण्डका आधारमा नख्खु–भैंसेपाटी दुवैतर्फ गरी ६ किमि तथा हनुमन्ते–ठिमि दोबाटो चोकसम्मको दुवैतर्फ गरी करिब ४ किमि सडक निर्माण भएको छ। यसअघी नै बाटो खुलीसकेको विष्णुमती नदी किनारको दुवैतर्फ गरी करिब २२ सय मिटर थप सडक व्यवस्थित् गर्न बांकी छ। पहिले खोलाको चौडाइ १२ मिटर थियो तर करिडोर बनेपछि ९ मिटरमा खुम्चिएको छ। पहिले–पहिले यहाँका यी खोलाबाट बालुका निकाल्ने हुँदा खोलाको सतह गहिरो थिए तर अहिले फोहोर र माटोको डंगुर थुप्रिन थालेपछि खोला बस्तीमा पस्न थालेका छन् अनि करिडोरको औचित्य माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
नेपाली आमा स्तनपानदेखि नै छोरीमाथि गर्छिन विभेद, छोराको चाहना छोरीको स्वास्थ्य र भविष्यसँग खेलवाड
नेपाली नागरिकलाई निचोरेर विश्व बैंकले कालो सुचीमा राखेको विदेशी कम्पनीलाई ११ अर्ब पोस्दै !
बिरामी हुन् नचाहने हरेक मानिसले हेर्ने पर्ने महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवार्ता (भिडियो)
मुल सम्झौता पारित नहुँदै एमसीसी अघि बढ्यो, कुन–कुन मन्त्रालयले गरे सम्झौता ? (भिडियोसहित)
मृगौलामा पत्थरी किन हुन्छ र यसको उपचार कसरी गर्ने ? (भिडियो)